Top Cat | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Top Cat | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Top Cat bụ otu nke kasị mma katuunu themed mkpụrụ ohere mpere si ama TV show nke 80 site otu aha. Na egwuregwu a, ị ga-esi na na na ya ise-esi anwụde na 20 nzọ-edoghi na-eme ka ụzọ maka ọtụtụ n'ịgwa. The-esi anwụde na-enịm n'elu ndabere oyiyi nke otu uzo warawara na New York yiri ahụ si show. The Jazz music nke eserese na-atọ isiokwu na-eme ka egwuregwu na ihe fun na-akpali. The music bụ nnọọ atụrụ ndụ oke, otú i nwere ike na-gị na jụụ n'oge egwuregwu. Ịkụ nzọ amalite na £ 0,20 ma i nwere ike na-ewu ya na £ 500 ọ bụla n'aka.
Banyere Mmepụta nke Top Cat
Nke a ma ama eserese na-atọ show dabeere mkpụrụ ohere mpere game e mepụtara site Blue Bipute. Otu n'ime n'elu mmepe na ụwa na ọgaranya ahụmahụ na nka dị iche iche elu-egwu ya edekọ usoro. Ha egwuregwu akwado ngwaọrụ dị ka iPhone, iPad, kọmputa dị iche iche smart mobile ngwaọrụ.
E nwere yi nnọchianya nke dị iche iche na nwamba sitere TV show na-ewetara gị na-echeta azụ. The pink na oroma nwamba kwuo 300x gị n'osisi ka ndị ọzọ na abụọ na-enye gị 200 ugboro. The top akwụ ụgwọ cat akara bụ onye ndú site egwuregwu aha na-akwụ gị 400 ugboro ise nke a na ụdị. Nke a na-egosi tụkwasa na-esi anwụde na-eme ka na-emeri mfe. The ala na mkpụrụ ego uru ihe atụ nke a mkpụrụ ohere mpere game na-egwuri egwu kaadị si Ace na Jack. E nwere ihe abụọ pụrụ iche atụmatụ na egwuregwu kpuchie nnọchianya nke oghere logo na a azụ ọkpụkpụ na a na-acha ọcha efere.
Wild Njirimara: The azụ ọkpụkpụ akara bụ ọhịa na ọ nọ n'ọnọdụ nile ma e wezụga ego akara. Ọ na-egosi na ihe nile nke 5 esi anwụde na-emepụta a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke n'ịgwa. Ise nke wilds ọbụna ịkwụ ụgwọ ị 500 mkpụrụ ego na ise akara anya.
Gbasaanụ Njirimara: The egwuregwu logo bụ ikposa nke a mkpụrụ ohere mpere game. Ọ nwere ike na-egosi na na-esi anwụde ise, anọ na atọ. Mgbe niile atọ ala, ọ unlocks a bonus larịị ebe ị ga-esi na-eburu si ise ukwu atụmatụ. Onye ọ bụla na-ekpughe a dị iche iche bonus na-agụnye free spins, ego mmeri na ndị ọzọ na bonuses.
Hotdog Re-atụ ogho: E nwere a na-ekpo ọkụ nkịta akara nke nwere ike ịpụta na na ukwu ise. Ọ na-egosi na-ekpuchi dum ukwu na awade re-atụ ogho na akara shifting ekpe na onye ọ bụla atụ ogho. The re-atụ ogho akwụsị mgbe akara-eche nche na nke mbụ ukwu.
Summary: Na pụrụ iche bonus atụmatụ na a jackpot gburugburu na oke ụgwọ ọrụ, ị nwere ike mfe na-atụ anya ime ka nnukwu echekwara nke uru na nke a mkpụrụ ohere mpere game.
Chioma O 'na-Irish Fortune spins